အွန်လိုင်းကစာအုပ်တွေရထားလက်မှတ်တွေ၏ Key ကိုအကျိုးကျေးဇူးများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > အွန်လိုင်းကစာအုပ်တွေရထားလက်မှတ်တွေ၏ Key ကိုအကျိုးကျေးဇူးများ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 29/03/2020)
အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုနီးပါးအရာအားလုံးဝယ်ယူရန်ကျွန်တော်တို့ကို enabled ထားပါတယ် အွန်လိုင်း. အမိန့်ကနေ အစားအစာများ, အဝတ်, ရုပ်ရှင်ပြပွဲများအတွက်လက်မှတ်တွေ booking နှင့်တစ်ဦးငွေပေးချေမှုအောင်မှအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေ, ကျွန်တော်တို့ဟာအွန်လိုင်းသောအရာတို့ကိုများများပြုနိုင်သည်. အွန်လိုင်းရထားလက်မှတ် booking ကျွန်ုပ်တို့သည်၏ဝန်ဆောင်မှုကနေရရှိခဲ့ပါပြီအခြားအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ် အင်တာနက်.
ကျနော်တို့ကို manual လက်မှတ်ဘွတ်ကင်၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်မည်မျှစိတ်ညစ်စရာစိတ်ကူးနိုင်ပြီးကျွန်တော်တစ်ဦးရှေးခယျြမှုရှိပါက, ကျနော်တို့ကအမြဲကရှောင်ရှားရန်ကိုကြိုက်လိမ့်မယ်. အွန်လိုင်း ဒေသခံရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်ရှာမည် system has helped us to avoid hassle and bustle of the manual ticket booking process and here we will talk about the key benefits of online train ticket booking.
ကျွန်တော်တစ်ဦးရထားလက်မှတ်သွားစဉ်းစားတိုင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုမှကြွလာသောပထမဦးဆုံးအရာရှည်လျားသောလူတန်းဖြစ်ပါသည်. ဒါကကျနော်တို့ကအမြဲရှောင်ရှားချင်ရာတစ်ခုခုသည်, ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးတန်အချိန်ထစားနိုင်အဖြစ်. ကျနော်တို့လက်မှတ်ကောင်တာရှေ့မှာရပ်သည့်အခါလူများတို့သည်လည်းမိမိတို့ရထားလက်လွတ်မြင်ကြပြီ.
ဤသူကားအ အခြားအားသာချက် အွန်လိုင်းရထားလက်မှတ်တွေ booking ၏. အွန်လိုင်းကသင်၏ရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်နိုင်ရန်အတွက်, ယနေ့ခေတ်သင်တို့ကဲ့သို့ဝန်ဆောင်မှုများကိုရှိ saveatrain.com သင်ရထားလမ်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူအပေါင်းတို့ကိုကမ်းလှမ်းမှုကိုရှာဖွေနှင့်သင့်လက်မှတ်ဘွတ်ကင်နိုင်သည့်.
ဥပမာ, သင်တစ်ဦးအဖြစ်ဥရောပတလွှားခရီးသွားလာလျှင် ခရီးသည်, သင်တို့အဘို့အဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ခရီးထူးခြားတဲ့စေနိုင်သည် Trans-ဥရောပရထားန်ဆောင်မှုများ. သငျသညျများ၏စာရင်းရှာတှေ့နိုငျ ခရီးစဉ်, မီးရထား အချိန်ဇယား, အွန်လိုင်းနှင့်လက်မှတ်ဘွတ်ကင်အဆောက်အ.
သို့သျောလညျး, သေချာ Third-party ဝက်ဘ်ဆိုက်များန်ဆောင်မှုများကိုကဲ့သို့စစ်မှန်ပိုက်ဆံငွေပေးငွေယူစက်ရုံအတူပါလာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်အောင် https://www.saveatrain.com သောနယ်သာလန်အတွက် Adyen ဖြင့်အများဆုံးအဆင့်မြင့်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်ကိုအသုံးပြုသည်.
ဘယ်အချိန်မှာကြောင့်အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုအောင်မှကြွလာ, ကျွန်တော်အပိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူ. အွန်လိုင်း၏လုပ်ငန်းစဉ် ဒေသခံရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင် အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုလိုအပ်ပြီးသင်အသုံးပြုနေတဲ့က်ဘ်ဆိုက်စစ်မှန်ကြောင်းကိုသေချာစေရန်ရှိသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
စစ်မှန်သောအွန်လိုင်းရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူများအဘို့အလုံခြုံငွေပေးချေမှု gateway များကမ်းလှမ်းနှင့်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးသေချာ. သင်သည်သင်၏ဒက်ဘစ်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကတ်များကိုအသုံးပြုနိုင်သို့မဟုတ် PayPal ကမှတဆင့်ငွေပေးချေစေခြင်းသို့မဟုတ်ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းလုပျနိုငျ.
ဤရွေ့ကားသင်အွန်လိုင်းကသင်၏ရထားလက်မှတ်လုံခြုံရေးအားဖြင့်ပျော်မွေ့နိုင် key ကိုအကျိုးခံစားခွင့်အချို့ရှိပါတယ်. အွန်လိုင်းဒေသခံရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရန်, you can contact us on info @ saveatrain.com.
ဤရွေ့ကားအွန်လိုင်းကစာအုပ်တွေရထားလက်မှတ်တွေ၏လူကြိုက်အများဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများကိုအချို့ဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်သင်သည်သင်၏မေးခွန်းများကိုအားလုံးအတှကျအဖြေကိုပြီးသားတယ်ရှိသည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်. တစ်ဦးရထား Save တစ်စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းမှာသငျသညျခရီးသှား၏ကုန်ကျစရိတ်ကယ်ဖို့ဆန္ဒရှိလျှင်သင်၏အွန်လိုင်းရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်, သငျသညျစစျဆေးနိုငျ တစ်ဦးကရထား Save ဝယ်ဖို့.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့် link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fkey-benefits-of-booking-train-tickets-online%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#travelbenefits ရထားခရီးသွား မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ
quick လမ်းညွှန်: မည်သို့ရန်ခရီးသွား Cinque Terre ရထားဖြင့်